Etu esi zụta otu n'ime nyiwe ndị ama ama, AliExpress | ECommerce ozi ọma
Otu esi azụta n'elu ikpo okwu AliExpress
Eleghi anya aha AliExpress, Ọ dị gị ka ọ maara nke ọma, mana ị maghị etu esi azụta, ma ọ bụ etu esi atụkwasị obi, mana ebe a ị ga-ahụ na ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya iji nweta ngwaahịa nke oge a site na Eshia, na ọnụ ala dị ala.
Otu n'ime ihe ndị kasị ugbu a ụzọ nke Ime ECommerce bụ site na AliExpress, nke na-agbanwe ngwaahịa ndị ị na-agaghị ahụ ebe ọ bụla ọzọ, si na kọntinent ọzọ webata n'ọnụ ụzọ gị ọtụtụ oge. Mgbe ahụ a Ntuziaka zuru ezu banyere otu esi eji ikpo okwu a iji nweta ihe anyị chọrọ enweghị ihe ize ndụ ma jiri obi ike kasịnụ.
Ntuziaka a metụtara mba ọ bụla, ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị si na Spain, Peru, Argentina, Chile, Mexico, Colombia, Ecuador, ma ọ bụ obodo ọ bụla ọzọ.
Iji mee ka obi sie gị ike, ị ga-amata obere ihe gbasara ụlọ ọrụ, AliExpress guzobere na 2009 ma ugbu a na-ere ma na-ebugharị ọtụtụ nde ngwaahịa gburugburu ụwa. Ihe ejiri mara ya bu nnabata nke enweghi edemede na ngwa ahia ya, o di ka nnukwu email site na nkasi obi nke komputa gi ma obu smartphone. You nwere ike ịzụta akụrụngwa, uwe, kọmputa, kọmputa, ọla, ọla, akpụkpọ ụkwụ, elekere, ụlọ na ubi, akụrụngwa, ngwa, ngwa, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Fọrọ Ihe obula na-abata n'uche, enwere ike idi elu na inwere ike ichota ya na AliExpress.
Dịka onye na-azụ ahịa, ị banyere n'ọnụ ụzọ ahụ, chọọ ma họrọ ngwaahịa nke masịrị gị, ịnwere ike ịtụ ahịa site na otu otu ma ọ bụ na-azụ ahịa ọtụtụ nkeji, mgbe ahụ ọ ga-enye gị ọnụahịa na usoro mbupu, ị na-akwụ ụgwọ site na kaadị akwụmụgwọ, kaadị debit ma ọ bụ PayPal, ma ị na-eche site na otu izu ruo ọnwa 2 maka nzụta gị iji rute n'ụlọ gị.
O yitụrụ ka Portal EBay nke North America, ma na nnukwu ihe dị iche na ị na-ahụ n'ezie ala ahịa na nnọọ peculiar ngwaahịa na ike ghara na obodo gị.
Nakwa ụzọ nke AliExpress, E nwere ụlọ ahịa ndị ọzọ dị n'ịntanetị nke sitere na Asia nwere njirimara ndị yiri ya dị ka Wish, Bangood, Gearbest, DHgate, Geekbuying, ndị bụ nhọrọ ndị magburu onwe ha, mana nke nwere ọtụtụ ngwaahịa na ahịa, doro anya. AliExpress.
1 Ndụmọdụ maka ịzụrụ na AliExpress
1.1 Esi zụta na aliExpress
2 Iji malite ịzụ ahịa:
3 Zọ ịkwụ ụgwọ:
3.1 E nwere ụdị ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ ma ana m akọwa ya n'okpuru:
4 Usoro mbupu:
4.1 Ekpụrụ Mbupu AliExpress
4.2 Mbupu Ọsọ
4.3 Nchekwa .zụta
5 N'ikpeazụ anyị nwere ike ịsị na ...
Ndụmọdụ maka ịzụrụ na AliExpress
Ọ bụrụ na ọ bụ oge izizi gị zụrụ site na AliExpress ma ọ bụ ịntanetị n’ozuzu ya, ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ị na-atụ ụjọ ịzụta ma chee na a ga-ezuru ego na kaadị gị ma ọ bụ ihe ị rịọrọ agaghị abịa, mana anyị na-enye ndị na-esonụ aro ka ị na-enwe afọ ojuju azụmahịa ịzụ site na nke a, na ịnata ngwaahịa gị ka ị rịọrọ maka ya n’enweghị nsogbu.
Iji malite, anyị ga-agwa gị na, ọ bụrụ na enwere ike, enwere ike na ngwaahịa gị agaghị abịarute ma ọ bụ na ọ bụghị ihe ị tụrụ anya ya, mana ọ bụkwa eziokwu n'otu ụzọ ahụ enwere ike idozi nsogbu ahụ, yana resending ziri ezi ngwaahịa ma ọ bụ ego azụDabere na uche onye ahịa, ọ nwere ike ịdị nwute ichere ogologo oge na ihe anyị chọrọ agaghị abịarute, mana n'ezie ikpe ndị a dị obere na anyị na-agbasi mbọ ike iji belata ihe omume ha, n'oge a ihe kachasịkarị bụ na ngwaahịa gị abịarute ọtụtụ oge tupu oge i chere, site na mmelite na ngwa ahia mbufe nke AliExpress.
Esi zụta na aliExpress
Jiri igwe nyocha AliExpress Iji chọọ ihe ịchọrọ, ọkacha mma na Bekee, ọ bụrụ na ị maghị etu, chọọ ya na onye ntụgharị okwu, ọ bụrụ na ị chọọ na Spanish enwere ike, mana ọtụtụ nsonaazụ nwere egwuregwu karịa mgbe ị na-achọ Bekee.
Tulee ọnụahịa, Ọtụtụ oge ngwaahịa na-apụta ma ịchọrọ ịzụta ya n'otu ntabi anya, mana oge ụfọdụ enwere ọtụtụ ndị na-eweta otu ngwaahịa ahụ, mgbe ụfọdụ nwere ọtụtụ dịgasị iche iche, mma ka mma, ọrụ ma ọ bụ ọnụahịa ka mma, yabụ ị ga-achọ aha aha ngwaahịa ahụ na igwe nyocha ma jiri ya tụnyere nhọrọ ndị nwere ike ịzụta na ohere kacha mma.
Lelee aha onye na-ere ere nke ọma, Nwere ike ịnweta ozi a site na ngwaahịa ahụ n'onwe ya, nke akpọrọ aha ya onye nyere ya, n'ụzọ doro anya na afọ ndị ọzọ na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ire ere, ọ bụ nhọrọ ka mma karịa ndị na-eweta ngwaahịa ọhụrụ na-amalite ịmalite ntọala netwọkụ ike ha.
Lelee nyocha ndị ọrụ AliExpress niile ndị zụtara otu ngwaahịa ịchọrọ, nke a ị nwere ike ịhụ na akụkụ ikpeazụ nke nkọwa ngwaahịa ahụ, ọ bụ nzaghachi ma baa ezigbo uru ịchọpụta ụdị soplaya na ngwaahịa ị na-achọ ịmekọrịta. Ebe ọ bụ na ndị ọrụ na-akọwa ahụmịhe ha na mbupu ahụ, ọnọdụ nke ngwaahịa a, nke na-agụnye foto doro anya nke ihe rutere na ihe ruru ole, ebe ọ bụ na ụfọdụ ngwaahịa ndị mmadụ na-akọwapụta na mbupu ahụ dị mbụ karịa ka a tụrụ anya ya, ebe n'ọnọdụ ndị ọzọ ọ ekwuputara nke ọma na ngwaahịa a were ogologo oge, n'etiti ọtụtụ ahụmịhe ndị ọzọ enwere ike ịnwe ya.
Họrọ usoro mbupu nke nwere nọmba nsuso, Nke a ga - enyere gị aka ịgbaso ụzọ nke iwu gị si China ruo mgbe ọ ruru n'ọnụ ụzọ ụlọ gị.
Ozugbo anatara nzụta gị nke ọma, ịkọrọ a foto ma ọ bụ ahụmahụ nke otu ebe ị zụrụ ya, ka i wee tinye aka na aha nke ngwa ahia ka otutu ndi mmadu zuta ya ma obu, mebie ya, ka ha kwusi ime ya n'ihi onodu nke i kwenyere na o kwesiri.
Iji malite ịzụ ahịa:
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ ọhụụ, ị ga-etinyerịrị ozi gị dịka aha, adreesị na akara ekwentị.
Nyochaa usoro ị ga-akwụ wee jiri kredit gị ma ọ bụ kaadị debit kwụọ ụgwọ site na itinye nọmba kaadị, ụbọchị ngafe na ọnụọgụ atọ na azụ, iji nyochaa izi ezi ya.
Zọ ịkwụ ụgwọ:
Isi usoro ugwo na AliExpress dị debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ.
Iwu a metụtara mba niile na-asụ Spanish. Kaadị nwere ike ịkwado VISA, MasterCard, American Express ma ọ bụ Nri Anyasị. Mana ị ga-eburu n'uche na ụfọdụ kaadị debit anaghị arụ ọrụ ebe ọ bụ na ha enweghị nhọrọ ịzụta n'ịntanetị, na ụfọdụ ndị ọzọ, ị ga-akpọ ụlọ akụ gị wee chere 24 ruo 48 awa ka ha rụọ ọrụ maka ịzụta n'ịntanetị .
Akwụ ụgwọ na dollar US, itinye ụkpụrụ a n'uwa, n'agbanyeghị, ebe a Na Spain na Mexico, a na-enye nhọrọ iji gbanwee ọnụahịa na ego mba ha, euro na pesos Mexico.
Maka mba ndị ọzọ dị na Latin America, AliExpress ọ na-achịkwa dollar US.
Ugbu a ọ bụrụ n ’ịkwụ ụgwọ gị na kaadị kredit, ụgwọ ị kwụrụ ga-eboro euro, dollar ma ọ bụ pesos Mexico, dabere n’ebe etinyere ya.
El a na-akpọ nhazi ihe nkwụnye ụgwọ Alipay, nke na-echekwa ozi gị echekwa. Ikwe ka ihe ndị ọzọ ịzụrụ mee ngwa ngwa.
Kwụ ụgwọ site n'aka ma ọ bụ debit kaadị na-kwupụtara n'ime 24 awa.
E nwere ụdị ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ ma ana m akọwa ya n'okpuru:
Obere ego iji kwụọ ụgwọ ya na usoro a bụ $ 20 dollar.
Ọ bụ ezie na ọ baghị oke uru, ọ na-eme ka ozi kredit gị ghara ịma aha ya ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị na-echegbu onwe gị.
Ọ bụ ezie na ọ na-aba uru maka ndị na-enweghị kredit ma ọ bụ kaadị debit.
AliExpress n'akpa uwe, Ọ bụ usoro ọzọ nke mejupụtara kaadị akwụmụgwọ kwalite iji kwalite akaụntụ AliExpress gị, ọ na-abịa na ụka nke $ 10, $ 20, $ 50, $ 100 na $ 150.
AliExpress n'akpa uwe Ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ ọzọ, enwere ike iji ya maka ụdị ịzụta ọ bụla na oge nke itule bụ afọ 3 na akaụntụ gị.
Oke kachasị ị nwere ike bulie onye a bụ $ 700 USD.
Icheta nke ahụ AliExpress bụ ụzọ maka ndị na-ere ahịa na China niile, emi odude ke nsio nsio ikpehe emi ẹwụkde ediwak miliọn ewụhọ. Usoro nkwadebe Mbupu na-ewekarị 1 ruo ụbọchị 3 na nkezi. Agbanyeghị, onye na-ere ahịa nwere oge nke ụbọchị 5 iji zipu ya dịka iwu AliExpress dị n'ime.
Mgbe ahụ enwere Shippingzọ mbupu ụzọ 4 ma ha bụ Mbupu Mbupu AliExpress, oge niile, ndị nkịtị na ngwa ngwa.
Ekpụrụ Mbupu AliExpress
Ọ bụ Ngwa mbufe AliExpress.
Onye na-ere ere na-eziga nchịkọta na mbupu mbupu, AliExpress Shipping, nke bụ ọrụ maka izipu ya na ebe ọ na-aga na nkwado ya na ndị na-eweta ngwa ahịa dịka Singapore Post, Omnivia-Estonia Post, DHL, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Oge a ga-abata bụ n’agbata abalị iri na ise na iri anọ na ise.
Uru nke a bụ ọsọ nke ngwugwu gị rutere, ọ bụrụ na ọ bụ ihe ịchọrọ ngwa ngwa, ọ bara uru. Ndị na-enye ọrụ lọjistik na-elekọta bụ DHL, Fedex, UPS na ndị ọzọ.
Na oge mbata nke 7 ruo ụbọchị 15 na nkezi. N'ụzọ doro anya, iji usoro mbupu a na-adịkarị ọnụ, mana ọ bara ezigbo uru
Ozugbo zụta na AliExpress Portal, A na-echekwa ịzụta gị na akpaghị aka maka oge akọwapụtara nke 45 ruo ụbọchị 60, dabere na onye na-ere ere. You nwere ike ịrịọ mgbatị nke oge nchedo ma ọ bụrụ na ngwaahịa gị abịaghị na oge agwara gị.
I nwere agbakwunye ụbọchị 15 mgbe ị nataghị ngwugwu gị ịrịọ ka ego gị laghachi. Ọ bụrụ na ịnataghị iwu gị mgbe oge emechara, kpọtụrụ onye na-ere gị site na AliExpress ozi ederede ma gbalịa iweta azịza na nkwekọrịta ya. Gbalịa ịde ya n’asụsụ Bekee ka e wee zaa ozi gị ozigbo.
Ha ga-enye gị azịza a ọsọ ọsọ wee zitere gị ngwugwu ahụ eruteghị ozugbo.
N'ikpeazụ anyị nwere ike ịsị na ...
AliExpress abụrụla ụlọ ahịa n'ịntanetị kachasị ukwuu n'ụwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iriỌ bụrụ n’ịchọrọ ịzụ ngwaahịa ọ bụla ị hụrụ n’ime ya, egbula oge ime nke ahụ site na isoro ihe ị mụtara na ntuziaka a, iji zere nghọtahie ga-eme n’ọdịnihu na ihe ịzụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Otu esi azụta n'elu ikpo okwu AliExpress
Ọ bụ ihe nwute ma mana m kwụrụ ụgwọ maka ngwaahịa m, ha na-agwa m na ọ laghachiri na onye na-ere ahịa na enweghị m usoro. N'ihi na m na ọ bụghị pụrụ ịdabere na!
Zaghachi Ana Maria
Gbanwee mmekọrịta, bulie mkparịta ụka na ecommerce